China Isizinda esisha sokukhiqiza i-iron oxide pigment seShijiazhuang Shencai pigment factory sifakwe kubakhiqizi bokukhiqiza nabaphakeli | I-Shencai Pigment
Isisekelo esisha sokukhiqiza i-iron oxide pigment baseShijiazhuang Shencai pigment factory sifakiwe ekukhiqizeni
IShijiazhuang Shencai Pigment Factory eyasungulwa ngo-2003 Sine-Iron oxide pigment Production Base enkulu (i-Hebei Chengyu Pigment Co., Ltd), itholakala e-Ningjin Salt Chemical Industrial Park, esifundazweni sase-Hebei, iyindawo epaki yezimboni yamakhemikhali, isemthethweni ukukhiqizwa. Ngemigqa emithathu yokukhiqiza, umthamo wokukhiqiza waminyaka yonke wamathani ayi-50,000 Le nkampani inabasebenzi abayi-100, abasebenza ngokukhiqiza i-iron oxide red, i-iron oxide ophuzi, i-iron oxide emnyama, i-iron oxide green, i-iron oxide blue, i-iron oxide brown, i-iron oxide orange nezinye izingcezu zombala wensimbi oxide, ezisetshenziswa kakhulu kupende, izinto zokwakha, iraba lepulasitiki nokunamathisela okususelwa emanzini, ukwakha izinto zokuhlobisa ngaphezulu. Imikhiqizo igcwele izikhwama zamaphepha e-kraft noma izikhwama zepulasitiki, 25kg / isikhwama, noma izikhwama zethoni.
Ngasikhathi sinye, sikhiqiza unamathisela ombala we-chrome oxide oluhlaza namanzi, kufaka phakathi okubomvu, okuphuzi, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuluhlaza okotshani, okuvukile, okubomvana neminye imibala.
Imikhiqizo ithunyelwa eRussia, eGibhithe, e-Algeria, e-Indonesia, eCongo, eHaiti nakwamanye amazwe nezifunda. Nethimba lobuchwepheshe bezocwaningo nentuthuko elizimele kanye nelebhu yezobuchwepheshe, ukusetshenziswa kwemishini yokuhlola esezingeni eliphakeme ukuqinisekisa ukuthi ukukhiqizwa kweqoqo ngalinye lemikhiqizo enekhwalithi ezinzile. UGu Zhihe, usihlalo webhodi labaqondisi, wamukela abantu abavela emhlabeni wonke ukuthi bavakashele ifektri futhi baxoxisane ngentuthuko efanayo. Sizobuyisela kumakhasimende amasha namadala ngenani elifanele kakhulu nensizakalo enhle kakhulu.